Nooca dib loo eegay ee macOS Big Sur 11.2.1 oo ay sii daayeen Apple | Waxaan ka socdaa mac
Waxay u muuqataa in qaybtii hore ee ay sii deysay Apple ee macOS 11.2.1 Big Sur ay jirtay in la qarinayay dhibaato si toos ah u taabatay faylka rakibaadda. Dhibaatadani waxay umuuqataa inay u horseedi karto xog luminta diskka iyo Apple waxay soo saartay nooc cusub saacado ka hor xalka dhibaatada la ogaaday.
Ma cadda in xukunkan uu wada saameeyay macOS dadka waaweyn ee isticmaala maaddaama qaar badani aysan haysan cusbooneysiin otomaatig ah oo firfircoon, laakiin haddii ay taasi dhacdo, Apple ayaa horeyba u soo saartay nooca cusub ee la cusbooneysiiyay si looga fogaado guul darrooyinka.
Tweet ka Mr. Macintosh wuxuu na tusayaa dhismaha noocyadan cusub ee macOS Big Sur 11.2.1 taas kiiskan waa 20D75. Noocaan waxaa hadda loo heli karaa si rasmi ah loogu soo dejiyo dhammaan isticmaaleyaasha wuxuuna xalliyaa dhibaatada sababi karta luminta xogta:
macOS Big Sur 11.2.1 (20D75) rakibiyaha buuxa ayaa hadda la heli karaa si loo soo dejiyo.
Waxaan xaqiijiyey in rakibayaashu hadda hubinayaan boos bilaash ah oo habboon.
Tani waxay ahayd dhibaato culus, waana ku faraxsanahay in isticmaaleyaashu aysan mar dambe ku dhici doonin arrintan. https://t.co/dYSuRjdd4p pic.twitter.com/ILxoKfhORn
- Mudane Macintosh (@ClassicII_MrMac) February 15, 2021
Waxay noqon kartaa in qaar ka mid ah isticmaaleyaasha isku dayay inay rakibaan nuqulkii hore ay heleen farriin ah meel disk aan ku filnayn oo lagu rakibo. Nidaamka waa la joojiyay oo lama cusbooneysiin karo, hadda waa nooca cusub ee la sii daayay ayaa la hubiyaa inay jirto meel bannaan oo wax lagu keydiyo oo la heli karo ka hor inta rakibidda ay billaaban oo sidan ayaa looga fogaadaa dhibaatada si khalad ah u tirtirta faylasha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » MacOS Big Sur » MacOS Big Sur 11.2.1 Nooc Dib loo eegay oo ay siidaysay Apple